Faahfaahin: Senator lala beegsaday qaraxii caawa ka dhacay Muqdisho | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Faahfaahin: Senator lala beegsaday qaraxii caawa ka dhacay Muqdisho
Faahfaahino ayaa ka soo baxaya Qarax caawa fiidnimadii ah ka dhacay magaalada Muqisho gaar ahaan wadada mashquulka badan ee Maka Al Mukarama.
Qaraxan ayaa ka dhacay meel u dhexeysa Hotelka Dayax iyo taalada Sayidka Sayidka ee wadada Maka Al Mukarama gaar ahaan afaafka hore ee Garaashka Daacad Car Care.
Wararka ayaa sheegaya in qaraxan oo loo adeegsaday miino wadada dhinaceeda la dhigay lala beegsaday gaari Proof ah oo uu leeyahay Senator Prof. Cusmaan Maxamuud Dufle oo ka tirsan Aqalka sare ee Baarlamanka Somalia.
Senator Dufle oo la socday gaarigiisa xiliga qaraxu dhacayey ayay wararku sheegayaan inuu ka badbaaday, hase ahaatee waxaa ku dhaawacmay labo askari oo ka tirsan ilaaladiisa, kuwaasoo la dhigay goobaha Caafimaadka sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedyo ku dhow Senatorka.
Laamaha amaanka DF ayaan ka hadlin qaraxan oo ku soo beegmaya xili magaalada Muqdisho ay ku soo badanayaan qaraxyada xiliyada habeenkii lala beegsado madaxda DF, dhowr habeen ka hor ayeyna aheyd markii sidan oo kale qarax la dhigay Isgoyska Km4 lala beegsaday gaari uu la socday Wasiir ka tirsan xukuumada Somalia.
Previous articleJoe Biden ku garaacay Donald Trump i kuna guuleysto Aqalka Cad: AP
Next articleTrump oo diiday guusha la saadaaliyay ee Biden, oo yidhi ‘doorashada meel fog ayaa ka dambaysa’
Regional authorities accuse Oromo Liberation Army of carrying out the attack, with reports putting the death toll at ‘several dozen’. The exact death toll remains...
Sidee ku timid raali-gelintii uu Xasan Cali Kheyre xalay siiyey siyaasiga...
Siduu Trump fursad dahabi ah ugu horseeday ninkan Soomaaliga ah?
Booliska Kenya oo wada baadhitaan ay ku hayaan ‘qawlaysato internet-ka” adeegsata